Calerman သည် Liberman ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်ဖြန့်ဝေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Calrec သည် Liberman ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်သည်
BURBANK, CA, နိုဝင်ဘာ 19, 2019 ယူအက်စ်တွင်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင်လူနည်းစုပိုင်ဆိုင်သည့်စပိန်ဘာသာစကားအသံလွှင့်သူ Liberman Broadcasting, Inc. (LBI Media, Inc. ) သည်အပတ်တိုင်း 50 နာရီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်သည်။ LBI Media ၏လျင်မြန်သောသတင်းစတူဒီယိုများသည်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသံဖြေရှင်းချက်များကိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ရန် LBI Media သည်မှီခိုသည် Calrec အသံ's Brio 36 နှင့် Summa ဒီဂျစ်တယ်အသံခလုတ်များ။
“ Calrec ကိုကျွန်တော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ငှားရမ်းတဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုလည်းဖြည့်စွက်ခဲ့တယ်။ အများစုက Calrec consoles တွေနဲ့ပါ။ ” အင်ဂျင်နီယာဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Chris Buchanan ကပြောကြားခဲ့သည်။ BBIO 36 သည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ Dallas (Irving, Texas) ရုံးတွင် LBI ၏အသစ်ထုတ်လွှင့်သည့်သတင်းများအတွက် Summa ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Burbank၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
LBI မီဒီယာသည်၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားသတင်းအစီအစဉ်များကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် console နှစ်ခုလုံးအပေါ်မှီခိုသည် Alarma တီဗီ, အယ်လ် Mameluco, iTestigo, Noticiero Cierra de Edicion, Noticiero Estrella တီဗီ နှင့် En Vivo ။ မည်သည့်စတူဒီယိုနှင့်မဆို LBI ၏ထုတ်လုပ်မှုနေရာများအတွက်အိမ်ခြံမြေသည်အရေးကြီးသည်။ Calrec Brio 36 ၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပုံစံသည်၎င်းကိုယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ Hydra2 သဟဇာတဖြစ်သောကိရိယာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းကို ပိုမို၍ စွယ်စုံသုံးနိုင်သည်။ Brio 36 သည်မျက်နှာပြင်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားသည့် analogue နှင့် digital I / O နှင့် GPIO တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်သည်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်သတင်းထုတ်လွှင့်မှု၏မြန်ဆန်သောသဘောသဘာဝဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dallas ရှိအသစ်သောနေရာတွင် Brio 36 ၏သီးသန့်ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း - ကျယ်ပြန့်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အသံကျယ်နှင့်ဘတ်စ်ကားအမြောက်အများပါဝင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ Buchanan ကထပ်ပြောသည်။ “ ဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်ခန်းထဲမှာရှိပြီးသား console ကိုငါတို့ Burbank စက်ရုံရှိ Calrec Summa နဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲဒီမှာအသံအင်ဂျင်နီယာတွေကအသံအရည်အသွေးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုချက်ချင်းသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ”
Calrec console နှစ်ခုလုံးသည်ကြီးမားသော networking စွမ်းရည်များနှင့်သွင်းအားစုများနှင့် output များကိုများပြားသောအတိုင်းအတာအထိချဲ့ထွင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ Buchanan နှင့် LBI မီဒီယာအဖွဲ့သည် Calrec console များ၏အရည်အသွေးနှင့်လွယ်ကူမှုတို့ကိုအလွန်သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ Calrec ကယူနိုက်တက်၏အသံကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် console နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မရနိုင်ပါ။ သူတို့ကမောင်းနှင်ရတာလွယ်ကူတယ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်တယ်၊ နောက်လာမယ့်အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ ဤအချက်သည် LBI နှင့်၎င်း၏တွဲဖက်ဘူတာများသည်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိကြည့်ရှုသူများအတွက်ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Summa နှင့် Brio 36 တို့သည်အသံအရည်အသွေးကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိမထိခိုက်စေဘဲပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ”
LBI နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Calrec သို့ ဆက်၍ သွားလိုသောကြောင့် ၀ မ်းသာကြောင်း၊ Calrec မှဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ Dave Lewty ကပြောကြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ consoles စများသည်ရိုးရှင်း။ အလိုလိုသိစေနိုင်သောလမ်းညွှန်နှင့်ထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ Calrec နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ”
ထက်ပိုမို 50 နှစ်ပေါင်းကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့် Calrec အပေါ်မှီခိုပါပြီ။ သူတို့ဟာနေဆဲလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်ကိုကြည့်ရှုအလေ့အထများနှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောစီးပွားဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ adapts အဖြစ်, Calrec သူတို့ IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများသို့ပြောင်းရန်အဖြစ်ရှေ့ဆက်နေဖို့ထုတ်လွှင့်ကူညီပေးနေသည်, ဝေးလံခေါင်ဖျားအသံလွှင့်နှင့်အတူထိရောက်မှုအောင်မြင်ရန်; virtualised ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူပိုက်ဆံကယ်ဖို့။ Calrec ရဲ့ရေဒီယို-အဓိကထားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အမျိုးအစား R ကို headless အပါအဝင်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပြီး, Calrec ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော Brio consoles စ မှစ. , IP ကို-enabled Impulse core ကိုရန် consoles စ၎င်း၏အကွာအဝေးတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်လုပ်, ဘက်ပေါင်းစုံကွန်ရက်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံသည်, Calrec ကဖုံးလွှမ်းထားသည်။ မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ calrec.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် Calrec Calrec အသံ Calrec Brio 36 Calrec Summa ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖျက်သိမ်း Audio Console ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု တိုက်ရိုက်အသံ ရောစပ် သတင်း လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-11-19
ယခင်: Viacom International Media Networks သည် 2019 MTV Europe Music Awards အတွက် Hitomi MatchBox ကိုဖြန့်ချိသည်
နောက်တစ်ခု: Telestream သည် OTT Streaming Media အတွက်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည်